Bayer gosipụtara ahịrị ngwaahịa kachasị elu - Magazin Sistemu Nduku
Bayer abụrụla onye mmekọ nke Potato Russia 2021, nke emere na Ọgọst 6 na mpaghara Moscow.
Nnukwu ụlọ ngosi ihe ngosi ikuku gụnyere ogige ngosi, ebe e gosipụtara ihe karịrị ụdị poteto iri asatọ nke nhọrọ Europe na Russia sitere na ndị mmalite 80. Bayer ewepụtala onwe ya ichebe ihe ọkụkụ niile site na ọrịa na ọrịa site na imepụta atụmatụ ọgwụgwọ dị irè. A rụchara ọrụ ahụ nke ọma, n'agbanyeghị na ọnọdụ ihu igwe na mpaghara ahụ anaghị eto nke ọma.
N'ikwu banyere ahụmịhe etinyere, ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ahụ kwuru na taa Bayer na -enye ọtụtụ ụdị ọgbara ọhụrụ n'ọhịa nke ichebe poteto na akwụkwọ nri site na ihe ndị na -emebi akụ na ụba, na ụlọ ọrụ ugbo ọ bụla nwere ike ịhọrọ site na ndepụta a ngwaahịa kacha mma izute ihe ọ chọrọ. .
Ndị isi ahịa
Dị ka ị maara, olu na ịdị mma nke ihe ọkụkụ na-adabere n'ụzọ dị ukwuu na etu esi ebu ụzọ gwọọ tubers. Bayer na -enye ngwaahịa kpakpando abụọ nke ekwesịrị ka ewere ụfọdụ nke kacha mma na otu.
Emesto Quantum®, KS -onye na-ahụ maka mgbakwasa ihe ọkụkụ na-ahụ maka ọgwụ-translaminar ọhụrụ iji chebe poteto pụọ na ahụhụ na-a (ụ (Colorado potato potato, wireworm, scoopers, larvae, aphids, wdg), yana ọrịa ndị na-adịgide na mkpụrụ na ala (ụdị ngosipụta ọ bụla nke rhizoctoniasis, ọla ọcha na akpụkpa, phomosis, alternaria na ire ere roba).
Emesto Silver®, KS - ọgwụ fungicidal systemic-translaminar maka njikwa oke nke rhizoctonia (ụdị niile), fusarium, akpụkpa ọla ọcha, anthracnose, phomosis, ire ere roba.
Ọgwụ abụọ a na -enye aka n'ịzụlite usoro mgbọrọgwụ nke abụọ, ịtọba nodules na mbụ; nwere mmetụta na -akpali akpali dị ike na osisi.
Nchekwa oge na nke ruru eru nke ịkụ ihe site na ọrịa adịghị obere mkpa mgbe ị na -eto nduku. Pọtụfoliyo Bayer gụnyere nnukwu nhọrọ nke ọgwụ fungicides, nke ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ahụ na -egosipụta nke ọma ụzọ na -ahụ maka njikwa nke ụdị ọrịa niile.
Ihe atụ nke ụdị ọgwụ a bụ Antracol® - kọntaktị fungicide nke na -echebe nduku na akwụkwọ nri site na mbubreyo, peronosporosis, alternaria, anthracnose. N'ihi ọnụnọ nke mejupụtara Zn ++ n'ụdị a na -enweta, ọgwụ na -akpali usoro biosynthesis na osisi. Ojiji nke ngwa a na -enyere aka ịbawanye mkpụrụ nke ihe ọkụkụ na ịdị mma nke ngwaahịa ikpeazụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo makwala usoro fungicide ọhụrụ ahụ. Infinito®, gosipụtara nke ọma n'ọgụ a na -ebuso ụdị mbibi ọ bụla.
Ndị ọrụ ugbo na -achọkwa ọgwụ ọhụrụ n'ahịrị - Ịdị jụụ Luna®. Isi ọrụ ya bụ ịchịkwa ụdị ọrịa fungal kachasị na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi. Ọ dị irè n'ọgụ megide Alternaria na nematode. Fungicide na -enye gị ohere ibibi ihe ndị na -akpata mbibi nchekwa n'oge oge na -eto eto na tupu idobe na nchekwa, nke na -eme ka o kwe omume ịbawanye oge ire ngwaahịa.
Ọgwụ nwere ọgwụ nje ọhụrụ abụọ n'otu oge: fluopyram na pyrimethanil. nke na -egbochi mmepe nke iguzogide.
Ọgwụ mgbochi ọrịa na -ewere ọnọdụ dị ukwuu na atụmatụ nchekwa nduku nke oge a, ebe ọ bụ na ụmụ ahụhụ nwere ike bute ihe ọkụkụ ahụ n'ụzọ dị iche iche na mmepe ya.
Otu “ngwa ọgụ” dị irè n'ọgụ a na -ebuso enwe nduku Colorado, thrips, aphids na scoops bụ ngwakọta kọntaktị ụmụ ahụhụ na -ejikọ ọnụ. Proteus®.
Otu n'ime ọdịiche dị n'etiti ọgwụ a na ihe analogues ya dị n'ụdị nkwadebe ya (mgbasa mmanụ), n'ihi nke a na -ekesa ya na -arụ ọrụ, na -ada n'elu akwụkwọ n'oge ịgba.
Ọgwụ ahụhụ ọzọ sitere na Bayer bụ Biscay® - na -ejikwa oke ọsọ eme ihe (nwere mmetụta ịkụ aka). Ọ bụ ọgwụ emebere nke ọma iji chekwaa ọka na mkpo, rapeseed na poteto site na nnukwu ahụhụ. Obere ihe ize ndụ nye ụmụ ahụhụ na -amụba.
Ahịrị ngwaahịa Bayer na -agbasawanye mgbe niile, n'oge na -adịghị anya, ụlọ ọrụ ahụ na -akwado ịnye ndị na -akụ nduku Russia ngwaahịa ọhụrụ na -ekwe nkwa.
Ihe okike nke mbụ n'ime ha - nje bactofungicide - bụ ihe dị mkpa na mmepe nke ntụzịaka ọhụrụ maka ụlọ ọrụ na imepụta ngwaahịa na -emetụta gburugburu ebe obibi.
Ọgwụ nwere usoro ihe omume pụrụ iche, na -enye njikwa zuru oke nke ọrịa. Nchekwa maka ndị na-eri anụ, ndị na-eri anụ, anụ na-akpụ ala. Ọ na -ejikọ nke ọma na sistemụ nchekwa dị ugbu a, na -agwakọta ya na ọtụtụ ngwaahịa nchebe yana microfertilizers. Enwere ike iji ya na sistemụ ugbo.
Ihe ọhụrụ nke abụọ bụ Bandur® - ihe ọkụkụ na-emepụta ihe ọhụrụ na-eme ihe dị iche iche megide ahịhịa dicotyledonous kwa afọ na ahịhịa nduku. Uru nke nkwadebe: obere ihe ize ndụ nke phytotoxicity, ọkachasị maka ụdị nwere mmetụta metribuzin; ntakịrị ihe ọghọm nke mmetụta na -egbu ahịhịa, gụnyere maka ihe ọkụkụ; dị irè megide ụdị ahịhịa dị iche iche.
Akwukwo nri na ubi kụrụ mkpụrụ
A nabatara Bayer na mpaghara ọrụ ugbo dị ka onye na -emepụta ngwaahịa na -echebe ihe ọkụkụ. Mana taa, ọ na-enyekwa ndị na-azụ ahịa nnukwu nhọrọ nke mkpụrụ ubi na ihe ọkụkụ, na-egosi akara Seminis nke Europe ama ama n'ahịa Russia.
Seminis bụ otu n'ime ndị na -emepụta mkpụrụ na ụwa na -emepụta mkpụrụ. Ka ọ dị ugbu a, ahịrị ika ahụ gụnyere mkpụrụ nke ihe ọkụkụ karịrị 20, karịa ngwakọ 2200.
Mkpụrụ ahụ na -egosi nsonaazụ dị mma na ala Russia. Ndị ọbịa niile nke Potato Russia 2021 nwere ike ijide n'aka nke a site na ịga na ebe nnwale na nguzo ụlọ ọrụ ahụ.
Na -akpọtụrụ ndị na -emepụta ihe ubi
Ụbọchị Ubi nduku abụwo nnukwu ihe ịga nke ọma, mana Bayer adịghị ọsọ ọsọ ịkele ndị sonyere ya. N'ime afọ abụọ gara aga, mgbe ohere ịme ihe omume ihu na ihu belatara nke ọma, ụlọ ọrụ ahụ, na-agba mbọ idobe oghere maka ndị na-akọ ugbo, agbasawanye ọnụnọ ya na oghere ịntanetị na ọbụna mepụta klọb nduku n'ebe ahụ: www.instagram.com/potato_club_bayer/ Ugbu a, a na -eziga ozi gbasara ngwaahịa ọhụrụ na nkwalite ebe a, ebipụtala echiche ndị ọkachamara, onye ọ bụla nwere ike ịkekọrịta ahụmịhe ha n'iji ngwaahịa. Bata, denye aha ka gị na ndị ọkachamara na -emekọrịta ihe mgbe niile.
Tags: Bayernchedo nduku na akwụkwọ nri
Oké ọkọchị napụrụ Chuvashia akụkụ dị mkpa nke owuwe ihe ubi nke ihe ọkụkụ gbanyere mkpọrọgwụ na ihe ọkụkụ